Camilo José Cela. Ezinaụlọ Pascual Duarte na ahịrịokwu iri na abụọ | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ndị edemede, Novela, ọtụtụ
Taa Camilo Jose Cela Ọ ga-atụgharịrị afọ 102, mana ọ hapụrụ anyị na 2002. Agbanyeghị, onye edemede Galician kachasị elu, odeakụkọ, edemede edemede, onye editọ na agụmakwụkwọ na onye mmeri nke Nrite Nobel na 1989 (na Cervantes na 1995 n’etiti ọtụtụ ndị ọzọ) na-aga n'ihu na-adị ndụ maka ụmụ ụmụ na ọrụ ya niile. Ya mere echetara m ya na a nhọrọ nke nkebi ahịrịokwu na amaokwu nke Ezinụlọ Pascual Duarte. Ihe kpatara ya? Akụkụ na-awụ akpata oyi n'ahụ nke ọrụ ahụ gosipụtara onye na-agụ m na onye edemede n'ọdịnihu.
1 Ihe kpatara ya
2 Nkebi ahịrịokwu 12 sitere na ezinụlọ Pascual Duarte
Ọ bụ otu n'ime ndị na-agụ akwụkwọ (Sochie, si Santillana) site na anaghị m echeta kpọmkwem usoro ahụ, ikekwe na 5th ma ọ bụ 6th afọ GBS. Na mgbe, n'oge ndị ahụ obere ederede ndọrọ ndọrọ ọchịchị na asụsụ na obere akwụkwọ ụtaba, ụmụaka nọ n’ụlọ akwụkwọ ahụ na-agụ ihe ọ bụla anyị kwesịrị ịgụ. Ọ bụ naanị iberibe akwụkwọ, ma eleghị anya otu n'ime ihe kasị sie ike nke ọtụtụ ndị nwere Ezinụlọ Pascual Duarte.
Ikekwe ọ dị n'ime ncheta m n'ihi asụsụ, okenye na aka ike, na n'ezie n'ihi ihe oyiyi na m weghachiri mgbe m gụrụ ya. Ama m ihe egbe bu na otu i si eji ya egbu mmadu, amakwara m ihe o bu inwe nkita. O gosiputara ihe m ga - acho dika odi ka onye na - agu akwukwo na onye edemede, ihe omuma a ebe m na - adighi nwoke onye mbu akuko ma ọ bụ ịdị ike ya ma ọ bụ iwe ya. Ọ bụ ọnọdụ nke Pascual Duarte Ome ya Anụọhịa.
12 nkebi ahịrịokwu nke Ezinụlọ Pascual Duarte
Ya mere, ọ na-aga ahịrịokwu nke akwụkwọ a bipụtara na 1942, otu n'ime nzuko na-arụ ọrụ nke onye dere ya, kamakwa banyere akụkọ Spanish banyere narị afọ nke iri abụọ.
Ọ na-egbu n’echeghị echiche, enwere m ya nke ọma egosipụtara; oge ụfọdụ, n’amaghị ama. Hate na-akpọ onwe gị asị, ị na-akpọ onwe gị asị nke ukwuu, na-agbasi ike, ma ị na-emepe agụba, ma jiri ya mepee ị ga-eru akwa ebe onye iro na-ehi ụkwụ na ụkwụ.
Ndi mmadu nile nwere otu akpukpo ahu mgbe amuru ha, ma, mgbe anyi tolitere, akara aka n’enwe obi uto igbanwe anyi dika anyi bu ndi wakwu ma gbadata n’uzo di iche iche rue n’otu aka ahu: onwu.
Echiche ndị na-akpasu anyị iwe adịghị abịa na mberede; na mberede mmiri riri obere oge, ma hapụ anyị, ka anyị na-aga, ogologo ndụ nke ndụ n’ihu. Echiche ndị na-akpali anyị ara site na ara kachasị njọ, nke mwute, na-abata obere obere na dịka enweghị mmetụta, dị ka enweghi mmetụta na alụlụ na-awakpo ubi, ma ọ bụ oriri nke ara.
Anwụ na-ada; a ga-akpọgide ọkụ ikpeazụ ya na cypress dị mwute, naanị ụlọ ọrụ m. Ọ dị ọkụ; Trefọdụ maa jijiji si na ahụ m; Enweghi m ike imegharị, anọgidere m dị ka a ga-asị na ọ dị n ’anya anụ ọhịa wolf.
Ihe adighi ka anyi chee na ha bu uzo mbu, ya mere o buru na mgbe anyi malitere ile ha anya nke oma, mgbe anyi malitere ịrụ ha, ha na ewetara anyi ihe ndia di iche na ihe anaghi amaghi, na, site na echiche mbu, oge ufodu anyi abughi ebe nchekwa; nke a na eme na ihu anyi chere.
Mmadu adighi eji ihe ojoo, kwere m, n'ihi na anyi nwere echiche mgbe nile na onye anyi na-anagide nke ikpeazu aghaghi ibu, obu ezie na emesia, ka oge na aga, anyi amalite ikwenye onwe anyi. - na nke kacha njọ ka ga-eme ...
M ga-eme ihe ọzọ, nke ọ bụla n'ime ihe ọtụtụ ndị mmadụ na - eme - na - enweghị achọpụta -; ọ ga-enwere onwe ya, dịka ọtụtụ ndị nwere onwe ha -nweghị ọkwa-; Chineke maara afọ ole ọ ga - adị n'ihu ya, dị ka ha mere - n'amaghị na ha nwere ike iji nwayọ nwayọ - ọtụtụ n'ime ụmụ nwoke ...
Ọ bụ ihe nwute na ọ theụ ụmụ mmadụ anaghị ama ebe ha ga-eduga anyị, n'ihi na ọ bụrụ na anyị mere ya, obi abụọ adịghị ya na ụfọdụ iwe iwe na ndị ọzọ ga-egbochi anyị; Ana m ekwu nke a maka na mgbede n’ụlọ Rooster bịara ka chapleti nke chi ọbụbọ, maka na amaghị ka esi akwụsị n’oge. Ihe ahụ dị mfe, dịkwa nfe dịka ihe kachasị sie ike na ndụ anyị na - adị mgbe niile.
E nwere ọtụtụ ọdịiche dị n'etiti iji anụ ọhịa na cologne chọọ anụ gị mma, yana iji egbugbu na-eme ya nke na-enweghị onye ga-ehichapụ ma emesịa.
Ọdachi kasịnụ nke ụmụ mmadụ yiri ka ha na-abịa n'echeghị echiche, site na nzọụkwụ ha, nke anụ ọhịa wolf na-akpachara anya, iji ihe ọgbụgba na mberede na nke aghụghọ ha dakwasị anyị dị ka nke akpị.
Ọ bụrụ na ọnọdụ m dị ka nwoke kwere ka m gbaghara, m gaara agbaghara, ma ụwa dị ka ọ dị ma chọọ ịkwaga megide nke ugbu a abụghị ihe ọ bụla ma ọ bụ mgbalị efu.
O ji okwu ọnụ tie m ihe, ma ọ bụrụ na anyị abịarute ịpịa aka, ana m a toụ gị iyi na m nwụrụ anwụ na m ga-egbu ya tupu ya emetụ m aka. Achọrọ m ịjụ oyi n'ihi na amaara m agwa m na n'ihi na site na nwoke na nwoke ọ dịghị mma ịlụ ọgụ na egbe mgbe nke ọzọ enweghị ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » Camilo José Cela. Ezinụlọ Pascual Duarte na ahịrịokwu iri na abụọ
Ajụjụ ọnụ nke Xabier Gutiérrez, onye okike nke Gastronomic Noir genre